Yaadannoon Waggaa 11ffa FDG/FXG gaafa Sadaasaa 12, 2016 Minnesotatti kabajame « QEERROO
Fincila Didda Gabrumma wagga 11ffa sababa gochuun qophiin Yaadannoo fi kabajaa guyyaa kana Konyaa Oromiya Minnesotatiin qindaawee Sadaasa 12, 2016 magaalaa Saint Paul, galma Concordia University keessatti sirna ho’aan kabajamee oole.
Guyyaan kun yaaddannoo waregaamtoota keenyaa kabajuun kayyoo isaan kufaniifis bakkaan ga’uuf Fincila Xumura Gabrummaa guutumma Oromiya keessatti deemaa jiru tinnisuuf hawaasa mariisisee dinagdee argamsiisu irrattis milkaa’ee jira. Qophiileen wal-fakkaatoon adunyaa mara irra bakka caasaan Adda Bilisummaa Oromo jirutti deema akka tures ifaa dha.
Keessummootni guyya kana argaman gama hooggana Dhaabaatiin J/Ararso Biqilaa, MKHR-ABO fi itti gaafatama Damee Dhiheessi akkasumas J/Goollicha Dheengee, MGS-ABO fi Ajaajaa Waraana Zooni Kibba yeroo ta’an karaa bilbilaa suduudaan dhaamsa balla dabarsaan. Dr. Mosisa Aaga keessumma keenya Alabama irra qaaman nuuf argaman yero ta’an Dr. Moosisaan barnoota balla ka’umsa FDG fi hidhata inni QEERROO waliin qabu bu’ura isaa irra hanga ammaatti ragaa dhaan Hawaasaaf ibsa ballaa kennanii jiru.
Adeemsaa walgahii Guyyaa kanaa gama Midiyaatiin Oromo TVn ballinaan qindeessaa waan tureef marsariiti dhaabbatichaa irra akka hordoftanis isin afeerra. Guyyaa kana milkeessuu irratti qaamoota nuuf dirmatan keessa bulchiinsi Concordia University galma isaani kaffaltii tokko malee bakka bareeda kana nuuf kennuun sochii Ummatni Oromoo haqaa isaa falmatuuf godhuu keessatti ga’ee gargaarsaa maallaqaan tilmaamamu nuuf godhanii jiru. Isa kanas maqa Ummata Oromtiin galateeffatnee jirra. Akkasumas Caayaleen keenya kanneen utuba sochii dhaaba kanaa ta’an kanneen akka Caaya Utuba ABO fi Caayaa Hirko WBO qophii keenya milkeessu irratti qooda olaanaa kennan.
Waluma galatti deggersa WBOf oolu sassaabuuf sagantaa gumaataa godhamee irra $32,700.00 (Cash) battalummatti Adda Bilisumma Oromotiif argamsiisamee jira. Akkuma beektan Korri Gamtaa ABO Amerikaa Kaabaa baatii sadii dura magaaluma kana keessatti ta’e $117,000.00 ol galii Dhaabaaf argamsisee xumuramuun ni yaadatama. Gargaarsi WBO fi sochu FXG milkeessuuf barbaachisu hundi bifa wal irra hin citneen akka itti fufu waada waliif galuun guyyaan kun xumurame.
Injifatnoo Ummata Oomoof!!
Konyaa ABO Minnesota
« Yaadannoo FDG 2016 fi Tinnisa Diinagdee Sochii QBO’f taasifame!